काठमाडौंबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको बस चेकजाँच गर्दा प्रहरीको उड्यो होस! – PathivaraOnline
Home > समाचार > काठमाडौंबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको बस चेकजाँच गर्दा प्रहरीको उड्यो होस!
काठमाडौं। प्रहरीले सवारी साधनलाई राजमार्गहरुमा नियमित चेकजाँच गर्छ। मंगलबार पनि मकवानपुर प्रहरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा खण्डमा सार्वजनिक सवारी साधानलाई चेकजाँच गर्न खटिएको थियो। र साथमा एक सूचना पनि थियो। यात्रुबाहक बसमा अवैध सुन आउने सूचना पाएको प्रहरीले काठमाडौंबाट वीरगञ्ज जाने बसलाई पर्खिरहेको थियो। हेटौंडा–१५ को रातेमाटे भन्ने स्थानमा प्रहरीले काठमाडौंबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको बस रोक्यो।
बसमा खानतलासी गर्दा बाहिर फलामले बेरिएको पातामा भित्रबाट विभिन्न साइजका सुनाका टुक्रा फेला परे। मकवानपुर प्रहरीले बसबाट ६ किलो, २८० ग्राग, ३५० मिली ग्राम सुन बराम भएको जनाएको छ। प्रहरीले सो सुनसहित भारत कर्नाटका ४२ बर्षीय अब्दुल मजिद अनेकललाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ।
बरामद गरिएको सो सुनको बजार मूल्यअनुसार ४ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका भारतीय नागरिक अब्दुललाई सुनसहित बाराको पथलैयास्थित राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ।
कतार र कुवेतबाट आएका दुई जनामा कोरोना आशंका
कोरोना संक्रमणको आशंकमा कतारबाट फर्किएका एक नेपालीलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।कतारबाट फर्किएका ती व्यक्तिलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ जाँच गर्दा ज्वरो रुघाखोकीको समस्या देखिएपछि टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले जानकारी दिएका छन् ।
अस्पतालका प्रवक्ता बास्तोलाले भने, “विमानस्थलमा स्वास्थ जाँच गर्दा ती कतारबाट आएका नागरिकमा ज्वरो रुघाखोकी देखिएपछि सिधै विमानस्थलबाट टेकु अस्पताल पठाएको थियो । हाल अस्पतालमा सोमबार एक जना र आज एकजना गरेर अस्पतालको आइसोलेसनमा दुई जना भर्ना गरिएको छ ।”आइतबार भर्ना भएका चारजनालाई कोरोना परीक्षण गर्दा केही नदेखिएपछि घर पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि चीनको वुहानबाट फर्काइएका १७५ जना नेपालीलाई पनि १७ दिन क्‍वारेन्टाइन बसाइपछि कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि सोमबार साँझ घर फर्काइएको थियो । विदेशबाट आउने नागरिकको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनिवार्य स्क्रिनिङको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने स्थलमार्गबाट आउनेहरुका लागि पनि सीमा नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वास्थ्य जाँच कक्ष स्थापना गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, ५ विद्यार्थी रहेनन्, अरूकाे यस्तो छ अवस्था!